Francisco Madeira,”Shacabka Ku Hoos Nool Alshabaab Waxay Wajahayaan Macluul”.
Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira oo maanta ka qeyb galay kulan looga hadlayay amaanka oo ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay inay wadaan qorshe loogu gurmanayo dadka ku dhibaateysan degaanada ay maamulaan dagaalamayasha Al-shabaab.
Danjire Madeira ayaa sheegay shaqada AMISOM ay u joogto Soomaaliya ay tahay nabadeynta dalka iyo la dagaalanka ururka Al-shabaab, isagoona tilmaamay howlgalka ciidamada AMISOM in uu wajahayo marxalad cusub.
Sidoo kale Franciso Madeira ayaa waxaa uu xusay in dhawaan gar-gaar ay gaarsiin doonaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ee lagu dhibaateeyo Shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa uuna Sheegay inaysan marnaba AMISOM u dulqaadan Doonin in Al-shabaab ay diidaan gar-gaar la gaarsiin waayo meelaha ay dhibaatada ku heysata Dadka ay Abaarta saameysan,islamarkaana iyagu ay ku sugan yihiin.
Hadalka Erayga gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa Xili Gobalo badan oo abaaro ka jira,islamarkaana ay maamulaan Al-shabaab aan Haatan gar-gaar bini’aadimo ah la gaarsiin Karin.